Maruva ekuYuropu - mbeu nembesa zvekutengesa - KPR - Chikwata Chevarimi vemapindu
Parizvino tinokwanisa kuunganidza mbeu ne mbesa kana takumbirwa (zvichisanganisawo zvimwe zve pambesa zvakaita semapazi, mbeu rumemabuma nezvimwe zvakadaro) kubva kundudzi dzinopfura zviuru zvina kubva kunyika guminepfumbamwe dzemuYuropu.
Tavekuunganidza kubva kunyika dzinotevera: Austria, Bulgaria, Czechia, Germany, Spain, Finland, Great Britain, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Montenegro, Macedonia, Poland, Portugal, Serbia, Russia, Slovenia, Slovakia
Tirikugadzirira kuunganidza kubva kunyika dzinotevera: Albania, Bosnia and Herzegovina, Belarus, Estonia, France, Switzerland, Italy, Kosovo, Norway, Sweden, Ukraine
Baya kuti ukudze mepu
Tinokwanisa kuunganidza chero mhando munzvimbo yenyu kana matikumbira. Asi hatitore mbesa dzakachengetedzwa pamutemo (Orchidaceae).
Kubva gore ra2002, tinowanisa mbesadzinobva muyuropu dzakasiyanasiyana gore negore kune varimi vemuno neve kunze nevanogadzira mishonga vanotsvagurudza mamiriro akasiyanasiyana embesa nembeu.
Mwaka yezvirimwa muYuropu unobvira munaKurume kusvikamuna Gumiguru. Kazhinji mbeu dzinookohwiwa kubva munaNyamavhuvhu na Gunyana dzimwe ndudza dzinotanga. Tinopa chitsidzo che makore mviri kuti mbeu dzinenge dzichiri kumera. Dzimwe mbeu dzinowanikwa chero nguva yegore asi dzakawanda tinowunganidza kana takumbirwatKana muine chamurikutsvaga kubva kuyuropu masvikachaipo Tizivisei tikuudzei zvatiinazvo mudura mumitengo nekuti mungazviwana sei.
Tinokwanisa kukuwanisai mitezo yembesa, mbeumapazi mbeu rume , mabuma nezvimwe zvakadaro, meristematic issues, Tinorima zve dzimwe mbesa muchidziwana dzakawanda nemutengo uri pasi dziri diki. Kana muchida mbesa odha yenyu ngayiuye Kubvumbi asati asvika kana dzichidyarwa muna Kubvumbi.
Tinopa nemutengo uripasi kune vanotenga mbeukana mbesa dzakawanda. Chitupa chePhytotosanitary nechekwakabva mbeu tinopa kana machikumbira.
Mungawana sei ndudzi dzemaruva emu Yuropu
1. Tumirai kero yenyu ye e-mail (Kubvumbi asati asvika) makanyora pasi ndudzi dzamurikuda mosanganisira zvinotevera:
- Kuti murikuda mbesa, mbeu, mabuma nezvimwewo
- Zvakawanda sei (zvingani, magiramu kana makirogiramu mangani embeu; zvidimbu zvingani zvembesa...)
- Kana muine zvamunoda zvakakoshesesa (se ruzivo rwe nzvimbo runofanira kupiwa kana mbeu dzinobva kune imwe nyika kana mbeu dzinobvanzvimbo dzakasiyanasiyana kana nyika nezvimwewo).
Kana muine ndudzi yamurikudisisisa isipo padura redu muine chokwadi chekuti yagara ichiwanika munyika kana nzvimbo dzatinokohwa mbeu ne mbesa tiudzei zita rayo re Chitriyana.
2. Tinokumirai nekeroyee-mail mazita endudzi dzose dzatino:
- Gona kukutumirai nekuchimbidza nekuti tinenge tiinadzo muchitoro chedu kana mumunda (munokwanisawo kutarisa mudura medu kana muchitoro chedu)
- Tinokwanisa kutsvaga kana kurimamwaka weZhizha unotevera – kana ndudzi yamunoda tisinayo kana kuti tisiri kuirima
Tinokuzivisai nee-mail mitengo yedu (mitengo yedu inobvira pa 0 5-1,50 Euro pahomwe imwe chete yembewu). Kana mafara nemutengo tinotumira pamuenge mangotibhadhara.
3. Kuunganidza kana takumbirwa
Ndudzi dzisiri mudurra medu tinotsvaga kana takumbirwa. Tinochegeta zvamunoda tokuzivisa kana tango wana rudzi rwa munoda uye kuti zvingaite mariiMitengo inoenderana nekuti zvatidyirawo marii kuti titsvage kuigadzira kuona kuti ndiyo chaiyo here (if taxonomically complicated species). Kana mangobvuma matibhadhara tinobva taungaanidza mbeu tokutumirai. Kanamusina kugutsikana hapana dambudziko hapana chamunobhadhara zvinoperera ipapo.
Kana tikatadza kukuwanirai mumwaka iwoyo kusvikira kupera kwa Mbudzi hatikuzivisei tobvisa muzvinyorwa zvedu chikumbiroo chenyuu naizvozvo kana musina kuwana pakero ye email kubva kwatiri Zvita asatiapera muchirikuda tinoedza kutsvaga mwaka we zhizha unotevera asi munofanirwa kuti tumira email yezvamurikudKubvumbi asati asvikail.
Mazita endudzi dzatinokwanisa kutsvaga
Hamusikuwana mbewu kana mbesa yamurikuda pane yatakanyora pasi? Tiudzei zvamurikuda tinokupai.